Min Residence ကို Lot 1A(A), 3A (A) Mindhama Road, Mayangone Township, Yangon တွင် Oxley Holdings Co.,Ltd and Mottama Development Group Co.,Ltd မှတာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Singapore နိုင်ငံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံးသော Developer များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Oxley Holdings ၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဦးဆုံးသော ခြေလှမ်းသစ်တစ်ခုအဖြစ် မင်းဓမ္မလမ်းမရှိ (၃.၁၈...
The Century Condominium ကို အမှတ် - ၂၁၈၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန် လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် Htun Myat Aung Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ The Century Condominium သည် ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး ဝယ်ယူထားသောအခန်းများအတွက် အာမခံဖြင့် ပြန်လည်ငှားရမ်း ဝန်ဆောင်မှု့ပေးသော...
Royal Thitsar Condominium
Royal Thitsar Condominium ကိုအမှတ် (၉)၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ သစ္စာလမ်းမကြီး (ကန်ဘဲ့လမ်း)၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် တွင် iGreen Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Location Map
Pan Swal Taw Condominium
Pan Swal Taw Condominium ကို အမှတ် - 228၊ အလုံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် Shwe Zabu Deik Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားသည်။ Facilities Gym Swimming Pool Sky Terrace - (8th & 15th ) Floor - Infinity Swimming Pool, Children Pool, Gym, BBQ Area, Business Center, (Facilities Area) (Home Theatre & Karaoke, 24 Hours Minimart.) Railroad View - (B-B1), (D-D1), (Da-Da1), (F-F1) Shwe Dagon View - (F-F1), (E-E1) (Ahone Road) Inner View - (C-C1), (A-A1), (C-Ca1) Pan Swal Taw Floor...
Waizayantar Apartment ကိုအမှတ် (၁၈၉)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် M.K.T Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Facilities Pile Foundation Wind Load & Earthquake Super Structure အိမ်သာရေချိုးခန်း၊ ကြွပြားကပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ အ၀ီစိတွင်း၊ မြေအောက်ရေလှောင်ကန် (၂၄)...
Atrium Condo ကို ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်း နှင့် အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဒေါင့် တွင် Yadanar Myaing Constructiion Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထား ပါသည်။Atrium Condo သည် မြို့တော်၏ အထင်ကရ နေရာများဖြစ်သည့် ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်/ရွှေဂုံဘုရား၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်/ ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံ၊ City Mart...
Zay Ya Thu Kha Street Apartment
Zay Ya Thu Kha Street Apartment ကို အမှတ်(၂၈-B)၊ ဇေယျသုခလမ်း၊ မုန့်တောင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Facilities အခန်းအကျယ် ၂၇' x ၄၄' ၂၅ပေလမ်း အိမ်၏မျက်နှာစာအရှေ့ဘက်သို့လှည့် 1 Master...
Upper Pazuntaung Street Apartment
Upper Pazuntaung Street Apartment ကို အမှတ်(၁၆၅)၊ အထက်ပုစွန်တောင်လမ်း၊ တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Facilities အခန်းအကျယ် 23' x...
Thuya 5st Apartment
Thuya 5st Apartment ကို အမှတ် (၁၇၀)၊ သူရ (၅) လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Facilities အခန်းအကျယ် 22' x 54' အိမ်၏မျက်နှာစာ အနောက် ဘက်သို့လှည့် ရေမော်တာ 1 HP...
Thu Mingalar Street Apartment
Thu Mingalar Street Apartment ကို အမှတ်(၁၂၃၇)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ ၇ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Facilities အခန်းအကျယ် 23' x 54' ၈၀ပေလမ်း အိမ်၏မျက်နှာစာအနောက်ဘက်လှည့် 1 Master bedroom နှင့်...